“प्रचण्ड बोलिमा बिक्छन, केपि ओलि लिखित नै खोज्छन”,मार्सीको भात खुवाउने दुर्गा प्रसाइँ
January 16, 2020 by साहारा संदेश
दुर्गा प्रसाईं एकजना विवादित व्यवसायी हुन् विशेष गरेर राजनीतिक सम्बन्ध राख्नका लाग उनले गरेका कामहरु विवादित तथा चर्चित भएक छन् ।
नेकपाका अध्यक्ष द्वय प्रधानमन्त्री केप शर्मा ओली तथा पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उनको निवासमा मार्सी चामलको भा खाएको विषय करिब दुई वर्ष अघि निकै चर्चित विवादित बनेको थियो ।
हालै प्रसाईँले चिकित्सा शिक्षा आयोगक उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले २० करोड रुपैयाँ घू मागेको पत्रकार सम्मेलन गरेरै जानकारी दिए । तर यति ठूलो रकम घूस मागेको सार्वजनिक भइसक्द पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकाय मौन छन् । उनको राजनीतिक सम्बन्ध,
त्यसको उद्देश्य गिरीले उनीसँग माग गरेको २० करोडलगायतक विषयमा दुर्गा प्रसाईँ ले बुधबार बाह्रखरीसँ खुलेरै कुराकानी गरे । प्रस्तुत छ, प्रसाईँ सँ बाह्रखरीले गरेको कुराकानीको अंशः तपाईं मेडिकल माफिया, राजनीतिज्ञ व्यवसायी या अरु के ?
तपाईंले आफ्नो परिच कसरी दिनुहुन्छ ? म राजनीतिज्ञ पनि होइन, माफिया त हुँदै होइन अझ मेडिकल माफिया त झनै होइन । म एउट स्वच्छ व्यवसायी हुँ । शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीलाई मैले महत्व दिएको छु । रोजगारी सिर्जना गरेको छु । अहिले पनि १५ स जनालाई रोजगारी दिएको छु ।
सुदूरपूर्वम सबैभन्दा बढी ट्याक्स बुझाउने कम्पनी मेरै हो । कति बुझाउनुहुन्छ वार्षिक ट्याक्स ? मैले वार्षिक १५ देखि २० करोड बुझाउँ राज्यलाई ट्याक्स । अहिले झापाम दक्षिणपूर्वी एसियामा नमुना क्यान्स अस्पताल ल्याएका छौं । त्यो पनि भर्खरै अपरेसनमा आएको छ ।
माफिया भनेर मलाई आरोप लगाउँछन् किन हो मैले बुझेक छैन । माफिया कस्तालाई भन्ने ? हतियार सप्ला गर्ने, लागुऔषधको कारोबार गर्ने, चेलिबेट बेचबिखन गर्नेलाई भन्नुपर्ने होइन र ?
रसिया दुबईमा त्यस्ता माफिया पाइन्छन् रे तर नेपालम त्यस्ता व्यक्ति मैले अहिलेसम्म भेटेको पनि छैन । मलाई सरकारले मेडिकल कलेज बना भनेर सम्बन्ध दिएको हो ।
Prevयस्तो अवस्थामा थिइन ७ लाख र सबै सुन बोकेर भागेकी प्रमिला सुनार : यस्तो भिडियो बाहिरियो
Nextनेपालमा भेटियो युरानियम, १ ग्राम कै यति धेरै मूल्य: नेपालले बेच्न सके नेपालको काया पलट हुन सक्ने